အာရှတိုက်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုက်ကြီးများတွင် အကြီးဆုံးနှင့် လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အာရှတိုက်ကို အာဖရိကယူရေး‌ရှား၏ ကုန်းမြေ အစိတ်အပိုင်းဟု ခေါ်ဆိုလေ့ရှိကြသည်။ စူးအက်တူးမြောင်း၏ ရှေ့ဘက်၊ ယူရယ်တောင်တန်းများ၏ အရှေ့ဘက်၊ ကော့ကေးဆပ်တောင်တန်း၊ ကက်စပီယန်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်နက်တို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ အာရှတိုက်သည် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်၏ ၈.၇ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေဧရိယာ၏ ၂၉.၇ ရာခိုင်နှုန်းကို လွှမ်းခြုံတားသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အာရှတိုက်တွင် နေထိုင်ကြသည်။
အာရှ၏ (ပထဝီ အနေအထားအရ ယူရေးစီယမ် ဥရောပ - အာရှ၏ ကျွန်းဆွယ်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သော) ဥရောပနှင့် ထိစပ်နေသောအပိုင်းသည် ယူရယ်တောင်တန်းများ၊ ယူရယ်မြစ်၊ ကက်စပီယံပင်လယ်၊ ကော့ကေးဆပ်ပင်လယ်၊ ပင်လယ်နက်၊ အီဂျီယမ်ပင်လယ်၊ ဘော့(စ်)ပေါရပ်(စ်)ဒေသ နှင့် ဒါဒင်နယ်လီ ရေလက်ကြားတလျှောက် ဖြစ်သည်။ အာရှ၏ အာဖရိကနှင့် ထိစပ်မှုသည် မြေထဲပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်နီကို ဆက်သွယ်ပေးသော စူးအက်တူးမြောင်းသာလျှင် ခြားသည်။ အာရှ၏အရှေ့မြောက် အစွန်တွင်ရှိသော ဆိုက်ဘေးရီးယားဆိုလျှင် မြောက်အမေရိကတိုက်နှင့် ဘာရင်းရေလက်ကြားသာ ခြားသည်။ အာရှတိုက်၏ တောင်ဘက်နယ်နမိတ်မှာ အေဒင်ပင်လယ်ကွေ့၊ အာရေဗီယမ်ပင်လယ် နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်-အရှေ့ဘက်တွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်၊ ပင်လယ်ဝါ၊ ဂျပန်ပင်လယ်၊ အော့ခို့(စ်ထ်)ပင်လယ်နှင့် ဘာရင်း ပင်လယ်- မြောက်ဘက်နယ်နမိတ်မှာ အာတိတ်သမုဒ္ဒရာတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
ဘူမိဗေဒရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် အာရှတိုက်သည် သက်တမ်းရင့် မြေထုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တောင်ဘက်ပိုင်းမှ အာရေဘီယမ်နှင့် အိန္ဒိယကျွန်းဆွယ် နှင့် မြောက်ဘက်ပိုင်းမှ ဆိုက်ဘေးရီးယား ကုန်းမြင့်များသည် အာရှအလယ်ပိုင်းမှ တွန့်လိပ်နေသော ကုန်းတန်းများ ခင်တန်းများကို ကာရံလျှက်ရှိသည်။ အာရှတိုက်၏ အနောက်အလယ်ပိုင်းနှင့် ဆိုက်ဘေးရီးယား ဒေသအများစုကို မြောက်ဘက်မြေနိမ့်ဒေသ၊ ကျယ်ဝန်းလှသော တရုတ်ပြည် တိဘက်ဒေသကို (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၁၅၀၀၀ / မီတာ ၄၅၇၀ ) အလယ်ပိုင်း ကုန်းမြင့်ဒေသ၊ ယင်းကို ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးတောင်တန်းများ ဖြစ်ကြသော ဟိမဝန္တာ၊ ခါရာကိုရမ်၊ ခွန်လွန်၊ သီယမ်ရှန်း နှင့် ဟိန္ဒူကွတ်(ရှ်) တို့က ဝန်းရံထားသည်။ တောင်ပိုင်း အိန္ဒိယနှင့် အာရေဘီယမ် ကျွန်းဆွယ်မှ တောင်ကြောများသည် ဂန်းဂျပ်(စ်)နှင့် တိဂရစ်-ယူဖရေးတီး(စ်) လွင်ပြင်များအထိ သွယ်တန်းမိသည်။ အာရှအရှေ့ပိုင်း မြေနိမ့်ဒေသ -တရုတ်ပြည်- တွင်လည်း တောင်ကုန်းများက အလယ်ပိုင်း ကုန်းမြင့်ဇုံအဖြစ် ပုံဖော်ပေးထားသည်။ နီပေါနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဧ၀ရတ်တောင်ထွတ် (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၂၉၀၃၅/ မီတာ ၈၈၅၀) နှင့် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့အနိမ့်ဆုံး ပင်လယ်သေ (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် ပေ ၁၃၁၂/ မီတာ ၄၀၀) တို့သည် အာရှတိုက်တွင်ပင် ရှိသည်။ မိခင်မြေထုမှ တိုးချဲ့ထွက်လာသော ကျွန်းဆွယ်များသည် သမုဒ္ဒရာများကို ပင်လယ်များ၊ ပင်လယ်အော်များအဖြစ် ကွဲသွားစေကုန်သည်။ ၎င်းတို့ကို မြောက်မြားလှစွာသော အာရှ၏ကျွန်းစုများက ဝန်းရံလျှက်ရှိသည်။ အာရှ၏ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး စာရင်းဝင် မြစ်များသည် တောင်ကုန်းများတွင် မြစ်ဖျားခံ၍ မြေနိမ့်ပိုင်းသို့ စီးဆင်းသွားကြသည်။ ထိုမြစ်များမှာ ဆိုက်ဘေးရီးယားမှ အော့(ဘ်)အားတိ(ရှ်)၊ ယန်နီဆဲ-အာဂါနာ နှင့် လီနာ၊ အရှေ့နှင့် ရှေ့တောင်အာရှမှ အမ်မော်-အာဂန်၊ ဟွမ်ဟီး၊ ကျန်ဇီ၊ မဲခေါင်၊ သံလွင်နှင့် ဧရာဝတီ၊ တောင်နှင့် အနောက်တောင်အာရှမှ ဂန်းဂျပ်(စ်)-ဗြဟ္မာပူထရာ၊ အင်ဒူး(စ်) နှင့် တိဂရစ်-ယူဖရေးတီး(စ်)၊ အာရှအလယ်ပိုင်းမှ အမူဒါယာ၊ ဆီးဒါယာ၊ အီလီနှင့် တာရင်း-၎င်းမြစ်များမှရေသည် ကုန်းတွင်းပိုင်းရေကန်များတွင် ရပ်တန့်ခြင်း (သို့) သဲကန္တာရမြေထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားကြသည်။ အေရယ်ပင်လယ်၊ ဘေကာရေကန် နှင့် ဘာကတ်(ရှ်)ရေကန် တို့သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာရင်းဝင် ကန်များ ဖြစ်ကြသည်။အာရှတိုက်၏ ရာသီဥတုမှာ အပူပြင်းဆုံး သဲကန္တာရမှ အေးခဲနေသော ရေခဲပြင်၊ မုတ်သုံမိုးကြောင့် အမြဲစိုစွတ်သော ဒေသများမှ အမြဲခြောက်သွေ့နေသော ဒေသများထိ ရာသီဥတုမျိုးစုံ တွေ့နိုင်သည်။
လူဦးရေ၊ ယဉ်ကျေးမှူနှင့် စီးပွားရေး
အာရှ၏ လူနေထူထပ်မှူသည် ရာသီဥတုနှင့် ရေမြေတောတောင် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပေါ် မူတည်၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ မုတ်သုန်ရာသီဥတုနှင့် မြေဆီဩဇာ ပေါကြွယ်၀သော နုံးတင်မြေနု လွင်ပြင်များသည် လူနေအထူထပ်ဆုံး ဒေသများအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းလွင်ပြင်များမှာ အိန္ဒိယမှ ဂန်းဂျပ်(စ်)လွင်ပြင်များ၊ တရုတ်ပြည်မှ ကျန်ဇီနှင့် မြောက်ပိုင်းလွင်ပြင်များ၊ ဂျပန်မှနုံးတင်မြေနု လွင်ပြင်ငယ်များ၊ နှင့် မီးတောင် ပေါက်ကွဲမှူကြောင့် မြေဆီလွာ ကောင်းမွန်နေသော မလေးကျွန်းစုများ ဖြစ်ကြသည်။ မြို့ပြလူနေမှူစံနစ်မှာ စက်မှူဖွံ့ဖြိုးသော ဂျပန်၊ ကိုရီးယားနှင့် ထိုင်ဝမ် တို့တွင် အများဆုံးတွေ့နိုင်သည်။ အာရှလူဦးရေ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်မှာ မွန်ဂိုမျိုးနွယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ကိုးကွယ်ကြသော အဓိကဘာသာများမှာ ဟိန္ဒူဝါဒ(အိန္ဒိယ)၊ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ(သီရိလင်္ကာ၊မြန်မာ၊ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် လော)၊ ဒလိုင်းလားမားဝါဒခေါ် တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာ(မွန်ဂိုလီးယားနှင့် တရုတ် အထူးသဖြင့် တိဗက်)၊ အရှေ့အာရှ ဗုဒ္ဓဝါဒ(တရုတ်နှင့် ကိုရီးယားတွင် ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ၊ ရှာမန်ဝါဒ၊ တာအိုဝါဒ များနှင့် ရောထွေးနေပြီး ဂျပန်တွင် ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ၊ ရှင်တိုဝါဒ တို့နှင့် ရောပြွန်းနေသည်။ အစ္စလာမ်ဝါဒ(အနောက်တောင်နှင့် တောင်အာရှ၊ အာရှအနောက်အလယ်ပိုင်း၊ မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှား)၊ ကတ်သိုလစ်ဝါဒ(ဖိလစ်ပိုင်၊ အရှေ့တီမောနှင့် ဗီယက်နမ်) တို့ဖြစ်ကြသည်။ သစ်တောထူထပ်သော အာရှတောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းဒေသအချို့တွင် အမဲလိုက်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်းတို့ကို အဓိက စီးပွားအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ အလယ်ပိုင်းနှင့် အနောက်တောင်ပိုင်း ဒေသများတွင် နေရာအတည်တကျ မရှိသော တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးသော ရွာများ ။ စက်မှူလုပ်ငန်းနှင့် ဂရုတစိုက် စပါးစိုက်ပျိုးရေးကို အာရှတိုက်တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းဒေသများရှိ မြစ်ကမ်း၊ ချောင်းကမ်းတစ်လျှောက် လွင်ပြင်များတွင် အတွေ့ရများသည်။ ဒေသအများ၏ ပူလွန်း အေးလွန်းသော ရာသီဥတုနှင့် မညီညာသော မြေပြင်အနေအထားများကြောင့် အာရှတိုက်၏ ၁၀% ခန့်သာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးကြသည်။ လူဦးရေ ထူထပ်လှသော နိုင်ငံများ(တရုတ်၊ အန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဂျပန်)တွင် အစားအစာများ၏ အဓိကသီးနှံ စပါးကို ပြည်တွင်းစားသုံးမှူအတွက် စိုက်ပျိုးကြသည်။ လူဦးရေ အလွန်မများသော(ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ပါကစ္စတန်)နိုင်ငံတို့တွင် စပါးကို ပြည်တွင်း စားသုံးရန်သာမက အဓိက နိုင်ငံခြားပို့ကုန်အဖြစ် စိုက်ပျိုးကြသည်။ အာရှတိုက်၏ အခြား အဓိကသီးနှံများမှာ ဂျုံ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ကြံ၊ ဝါ၊ ဂုံလျှော်၊ ပိုးစာပင်၊ ရာဘာ၊ လ္ဘက်နှင့် အုန်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို ပင်မစီးပွားရေးအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသော အာရှနိုင်ငံများတွင် လျှပ်စစ်မီး၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ ခေတ်မီ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်ချောပစ္စည်း ထုတ်လုပ်နိုင်မှူတို့၌ စက်မှူနိင်ငံများကဲ့သို့ပင် တိုးတက်လှသည်။ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ရုရှအာရှနိုင်ငံများ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ တူရကီ၊ နှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံတို့သည် စက်မှူထွန်းကားသော နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည်။ ဂျပန်နှင့် အာရှနဂါးလေးကောင် ဟုခေါ်ဆိုကြသော ထိုင်ဝမ်၊ ကိုရီးယား၊ စင်္ကာပူနှင့် ဟောင်ကောင် နိုင်ငံများသည် အာရှတိုက်မှ ထင်ရှားသော စက်မှုနိုင်ငံများ အဖြစ် ထင်ရှားသည်။ လုပ်အားခ ဈေးပေါသော ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ဒေသများသည်လည်း ဂျပန်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် စက်မှုနိင်ငံများ ဖြစ်လာစေဖို့ ချီတက်နေကြသည်။ ၎င်းစက်မှုနိုင်ငံများတွင် ရထားလမ်းများလည်း ကောင်းစွာတိုးတက်သည်။ ဂျပန်၊ အန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် ရုရှအာရှ နိင်ငံများတွင် အလွန်ရှည်သော ရထားလမ်းများနှင့် ရထားလမ်း မိုင်ပေါင်းများစွာ ဖောက်လုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အာရှနိုင်ငံများ၏ ဝင်ငွေကို အဓိက အထောက်အကူပြုသော လုပ်ငန်းမှာ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အနောက်တောင်အာရှ၊ အလယ်အာရှနှင့် အင်ဒိုနီးရှား တို့မှ ရေနံ ; မလေးရှား၊ ထိုင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှားမှ သံဖြူ ; အိန္ဒိယမှ မန်းဂနိ(စ်) ;တူရကီနှင့် ဖိလစ်ပိုင်မှ ခရိုမိုက် ; တရုတ်မှ တန်စတင်၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဆီနှင့် ခနောက်စိမ်းတို့သည် အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ ဝင်ငွေအထောက်အကူပြု ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။
အာရှတိုက်သည် ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး လူနေမှုစံနစ်များ ယဉ်ကျေးမှုများ ထွန်းကားခဲ့သော အရပ်ဖြစ်သည်။ ဆူမာ၊ ဘေဘီလုံ၊ အက်စ်ဆီးရီးယား၊ မီဒီယာနှင့် ပါရှားတို့သည် အလွန်ရှေးကျသော လူနေမှုစံနစ်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုများ ထွန်းကားခဲ့ရာ အင်ပါယာများအဖြစ် ကျော်ကြားသည်။ ၎င်းဒေသများနှင့် အနောက်တောင် အာရှတွင် အစ္စလာမ် လူနေမှုစံနစ် ထွန်းကားနေချိန် အရှေ့ဘက်တွင် အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် ဂျပန်တို့၏ လူနေမှုပုံစံများ ပျံ့နှံ့လာပေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နေရာ အတည်တကျမရှိ လှည့်လည်သွားလာ နေထိုင်ကြသောဟန်၊ မွန်ဂိုနှင့် တာ့ခ် လူမျိုးစုများသည်လည်း မြောက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် အင်ပါယာများ တည်ထောင်လာကြသည်။ ၁၃ ရာစုနှင့် ၁၄ ရာစုများတွင် ၎င်းတို့၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အင်အားအကောင်းဆုံး အနေအထား ရောက်ခဲ့သော်လည်း အဆုံးတွင် အနောက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြခြင်းဖြင့်ပင် အဆုံးသတ်လေသည်။ မွန်ဂိုများ တန်ခိုးကြီးထွားချိန်တွင် ဥရောပမှ ရှေးဦး ခရီးသွားများ ယင်းဒေသသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုခရီးသွားများထဲတွင် အီတလီနိုင်ငံသား မာကိုပိုလိုမှာ ထင်ရှားသည်။ ၁၄၉၈ခုနှစ်၊ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသား စွန့်စားရှာဖွေသူ ဗာစကိုဒဂါးမား အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ရေကြောင်းမှ ရောက်ရှိလာမှုသည် အာရှတိုက်တွင် ဥရောပတိုက်သားများ၏ နယ်ချဲ့မှုအစပင် ဖြစ်တော့သည်။ ၁၆၄၀ တွင် ရုရှမှ ကော့ဆက်စ်သည် ဆိုက်ဘေးရီးယားကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ပစိဖိတ်ဒေသတိုင် အာရှမြောက်ပိုင်းကို ကျူးကျော် ဝင်ရောက်လာသည်။ ၁၇ ရာစုတွင် အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဒတ်ရှ်နှင့် ပေါ်တူဂီမှ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများ အိန္ဒိယ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် တရုတ်ပြည်တို့တွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး ရလဒ်မှာ အာရှမြေပေါ်တွင် ဥရောပနိုင်ငံသားများ၏ စီးပွားရေး ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မှုများ ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။ အချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်မှူများအပေါ် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ခြင်း၊ စက်မှုတော်လှန်ရေးမှ ရရှိလာသော နည်းပညာ အသစ်များကို အသုံးချနိုင်ခြင်း တို့မှ ရှေးဦးစွာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသအချို့ ၊ထို့နောက် အနောက်တောင်နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ၏ နိင်ငံရေး နယ်ပယ်များတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီး ဥရောပသားတို့ အာဏာ ချဲ့ထွင်လာခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ဖိအားပေးမှုကြောင့် တရုတ်နှင့် ဂျပန်တို့လည်း ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ ဖွင့်ခဲ့ကြရသည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီး အာရှတွင် ဥရောပသားတို့စိုးမိုးမှု လျော့ကျသွားပြီး အာရှသားတို့လည်း အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်များ နိုးကြားလာပြီး ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် နှင့် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားမှုများ စတင်လာကြသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့် ပဋိပက္ခများ၊ တိုက်ပွဲများအကြား အာရှသည် များစွာ အထိနာခဲ့သည်။ စစ်ပြီးနှစ်များတွင် ဖြစ်ကြသော နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခများသည် စတင်သန္ဓေတည်ရာ ဥရောပမှ အာရှသို့ ကမ္ဘာစစ်နှစ်ခုလုံး၏ ဗဟိုအဖြစ် ပြောင်းလာခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာစစ်များအပြီး စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလ၊ ကိုလိုနီနိုင်ငံငယ်များ အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြသော အာရှနိုင်ငံများတွင် စစ်ပွဲငယ်များ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု မရှိပေ။ ထိုစစ်ပွဲငယ်များထဲမှ အာရပ်နှင့် အစ္စရေးတိုက်ပွဲများ၊ ကိုရီးယားစစ်ပွဲ၊ ကွန်မြူနစ်အစိုးရများ ပေါ်ထွက်လာသော တရုတ်၊ ကိုရီးယားနှင့် ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲများမှာ တင်းမာမှုအားကြီးသော စစ်ပွဲများဖြစ်သည်။ ၁၉၅၀ပြည့် နှစ်များ၌ ဥရောပသည် အာရှတွင် တရုတ်နှင့် ဆိုဗီယက်တို့လွှမ်းမိုးမှုကို တန်ပြန်ရန် ဘဂ္ဂဒတ် ပဋိညာဉ်(နောင်တွင် ဗဟိုစာချုပ်အဖွဲ့-စီတီအို)၊ အရှေ့တောင်အာရှ စာချုပ်အဖွဲ့ (ဆီးတိုး) စသော မဟာမိတ်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြန်သည်။ သို့သော် ၁၉၆၀တွင် တရုတ်နှင့် ဆိုဗီယက် အက်ကွဲကြောင်း ထခဲ့ပြီး ကြိုးပမ်းလာခဲ့သော ဖက်စပ် ကွန်မြူနစ်တိုက်ကြီး စီမံကိန်းအိပ်မက် ပျက်ပျယ်ခဲ့ရသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီးတွင်လည်း အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်နှင့် နယ်သာလန်တို့သည် အာရှတွင် အဓိကတပ်များအဖြစ် ဆက်လက် တပ်စွဲထားကြသည်။ သို့သော် စစ်ပြီးခေတ် အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အခြားအာရှနိုင်ငံများသည် ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်တွင် ပို၍လွတ်လပ်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်ရန် ကြိုးစားလာကြသည်။ ၁၉၆၀ နှင့် ၁၉၇၀နှစ်များတွင် အင်္ဂလန်က စူးအက်တူးမြောင်း အရှေ့ဘက်ဒေသကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်၊ နှင့် အမေရိကန်က ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွင် အသာရနေမှုတို့သည် အနောက်တိုင်းသားများ အာရှတွင် အာဏာချိန်ခွင်လျှာ ညှိနေမှူကို မီးမောင်းထိုးပြသလို ဖြစ်နေပေသည်။ တရုတ်၏ အင်အား ကြီးထွားလာမှုနှင့် ဆိုဗီယက်၏ အာရှနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေး အရှိန်မြှင့် တိုးချဲ့လာမှု(အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရပ်နိုင်ငံများ)တို့သည် ဒေသတွင်း ကွန်မြူနစ်အုပ်စုနှင့် ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်သော အုပ်စုတို့အကြား ဆန့်ကျင်ဘက် အင်အားစုများ ယှဉ်ပြိုင်နေမှုဖြင့် အာရှ၏ မငြိမ်သက်မှုကို ပြသနေပြန်သည်။ အခြားသောအဖွဲ့များ၏ ၁၉၇၀-၁၉၈၀ နှစ်များ ယှဉ်ပြိုင်မှုများကလည်း မတည်ငြိမ်သော အာရှကို ပိုမိုပီပြင်အောင် သရုပ်ဖော်ပေး နေပြန်ပါသည်။ ပုံမှန်တိုးနေသော လူဦးရေတိုးနှုန်းသည် အာရှနိုင်ငံများကို ဆင်းရဲမွဲတေမှူ သက်တမ်းရှည်စေခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုံလောက်စွာ မပေးနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ များပြားလာခြင်း၊ ထိုက်သင့်သော လုပ်အားခ မခံစားရခြင်း၊ သမိုင်းတလျှောက် ကြုံတွေ့လာရသော ခါးသီးမှုများကြောင့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံအချင်းချင်း အထိမခံ သည်းခံမှုနည်းပါးခြင်း စသည့်အချက်များ ရလဒ်ဖြစ်စေသည်။ စစ်အင်အား တောင့်တင်းကြသော အီရန်၊ အီရတ်၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားတို့က အားနည်းသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကို ကျူးကျော်ခြင်းကြောင့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများအကြား တိုက်ပွဲငယ်ကလေးများ အပါတ်စဉ် ဖြစ်ပွားစေသည်။ ၁၉၇၃-၁၉၇၄ နှင့် ၁၉၇၉ ခုနှစ်များတွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကမ္ဘာ့လောင်စာဆီ အကျပ်အတည်းဖြစ်မှူ၊ ဂျပန်နှင့် အာရှနဂါးများ စီးပွားရေးအင်အား တောင့်တင်းလာမှုတို့သည် စောစောပိုင်း ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို စိုးမိုးထားသော အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများကို တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားစေခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တောင်းဆိုလာသော လူမျိုးစုများ၊ နယ်စပ်နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်မှု မမျှတခြင်းများကြောင့် အိန္ဒိယမှ ဒေသအချို့၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ၊ နီပေါနှင့် မြန်မာနိင်ငံတို့မှာ ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခများ၊ ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခများဖြင့် မအေးချမ်းခဲ့ပေ။ ၁၉၇၉ အီရန်နိုင်ငံတွင် အသစ်ပေါ်ထွက်လာသော အစ္စလာမ်မစ် အင်အားစုများ နေရာရလာပြီး အနောက်တောင်နှင့် တောင်အာရှ နိုင်ငံများမှ အစိုးရများကိုပါ ယင်းအင်အားစုများ ပျံ့နှံ့တိုးပွားလာမှုဖြင့် ခြိမ်းခြောက်နေပြန်ပါသည်။ ၁၉၉၀ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ၎င်းတို့ပင် အသာရပြီး နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၀ တွင် မအောင်မြင်သော အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ကျူးကျော်မှူကြောင့် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲခြင်းသည် စစ်အေးတိုက်ပွဲကို အငွေ့ပျံစေခဲ့ပြီး အာရှအလယ်ပိုင်းတွင် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်စုကို မွေးဖွားပေးခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ တွင် တရုတ်သည် စီးပွားရေး တိုးတက်မှူ အလွန် အားကောင်းလာပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများမှာမူ တိုးတက်မှု နှေးကွေးသွားသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၏ စီးပွားပျက်ကပ်သည် ဆူဟာတိုကို ထိုင်ခုံပေါ်မှ ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အစပြုခဲ့သလို လွတ်လပ်ရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး တောင်းဆိုမှုများ(အရှေ့တီမော၊ အာချဲနှင့် ပါပူဝါ) ရှိလာခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ၌ပင် တစ်ချိန်က အာရပ်-အစ္စရေး ပဋိပက္ခတွင် တိုက်ခဲ့ကြသူများ အကြားတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာနေပေသည်။
အာရှတိုက်၏ ရာသီဥတုအကြောင်းကို ခြုံ၍ ပြောရန် အလွန်ခက်၏။ ပူသောတိုက်ကြီးဟု ပြောရမည်လည်း မလွယ်။ အေးသည်ဟုလည်း မပြောနိုင်။ မိုးအလွန်ရွာသောတိုက်ဟု ပြောရမည်ကလည်း တစ်နေ့လျှင် မိုးရေချိန် နှစ်လက်မကျော် သုံးလက်မ ရွာသောဒေသ ရှိငြားလည်း တစ်နှစ်လုံးနေ၍မှမိုး တစ်ပေါက်မျှ မမြင်ရသောဒေသလည်း ရှိနေသေး၏။အာရှတိုက်ဟူသော အမည်သည် ဟီဗရူဘာသာမှဆင်းသက် ၍ အရှေ့၊ သို့မဟုတ် နေထွက်ရာဟုအဓိပ္ပါယ်ရ၏။ အာရှတိုက်သည် ကမ္ဘာဦးလူတို့ စတင်ပေါက်ဖွားရာဒေသဟု ခရစ်ယာန်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ဆိုထား၏။ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒဆိုင်ရာ စာပေကျမ်းဂန်တို့၌လည်း ကမ္ဘာပျက်၍ ဦးစွာပေါ်လာသော ဌာနသည် ဇမ္ဗူဒီပါလက်ယာတောင်ကျွန်းရှိ ဘုရားပွင့်ရာမြေဟု ဆိုထားရာ ကမ္ဘာဦးအစကပင် သမိုင်းတွင် စာတင်လောက်အောင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော တိုက်ကြီးဟု ဆိုရပေမည်။အာရှတိုက် အီရတ်နိုင်ငံရှိ ယူဖရေးတီးနှင့် တိုင်းဂရစ်မြစ် ဝှမ်းဒေသသည် ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု စတင် ထွန်းကားရာဌာန ဖြစ်၏။ ထိုဒေသတစ်ဝိုက်ရှိ တိုင်းပြည်တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယဉ်ကျေးမှုနိုးကြားထကြွခြင်း မရှိမီကပင် ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက် လျက်ရှိသော မင်းနေပြည်တော်များ ဖြစ်ခဲ့ကြ၏။ ဆီးရီးယား နိုင်ငံတွင် ယခုထက်တိုင် ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု၏ သဲလွန်စ အနုပညာလက်ရာများကို အထင်အရှား တွေ့ရှိနိုင်လေသည်။ ဥရောပနှင့် အမေရိကတိုက်များရှိ လူတို့သည်ပင် အထက်ပါ ဒေသများမှ စတင်ပေါက်ဖွားလာသော လူမျိုးစု၏ အဆက် အနွယ်များ ဖြစ်လေသည်။ အစ္စလာမ်အယူဝါဒ ထွန်းကားစအခါလောက်က အာရပ်တို့သည် ဆင်စီး၊ မြင်းစီး၊ စစ်တိုက် အလွန် ကျွမ်းကျင်ရကား အာဖရိကတိုက်နှင့် စပိန်ပြည်ဘက်သို့ပင် နယ်ချဲ့လာခဲ့ရာ ဥရောတိုက်ကို အာရပ်တို့ ကြီးစိုး မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ မွန်ဂိုလူမျိုးတို့သည် အာရပ်တို့ကြီးစိုးရာ ဗဂ္ဂဒက်နှင့် ဆီးရီးယား ကို သိမ်းပိုက်လိုက်၍သာ ဥရောပတိုက်သည် ထိုဘေးမှ သီသီကလေး လွတ်ခဲ့လေသည်။ ယင်းသို့ လွတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဥရောပတိုက်မှ ကုန်သည်များ၊ နယ်သစ်စွန့်စားရှာဖွေသူများ၊ သာသနာပြုများ၏ ပယောဂကြောင့် အာရှတိုက်သည် ဥရောပတိုက်သား တို့၏ နယ်ချဲ့ရာမြေ ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။ အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ ဒပ်ချ၊ ပေါ်တူဂီလူမျိုး တို့သည် ဤသို့ဖြင့် အာရှတိုက်တွင် အင်ပါယာ ချဲ့နိုင်ခဲ့လေသည်။ ဤအချိန်မှစ၍ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု များသာ တဖြည်းဖြည်း ထွန်းကားလာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အနောက်တိုင်းသားတို့ ကြီးစိုးသည်ကို ငုံ့၍ခံမည့် လူမျိုးများ မဟုတ်သည့်အတိုင်း ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံက အာရှသည် အာရှလူမျိုးများအဖို့ဟူသော ကြွေးကြော်သံနှင့် ဗြိတိသျှအစရှိသော အနောက်တိုင်းသားတို့အပေါ် စစ်ကြေညာလိုက်လေသည်။ စစ်ကြေညာပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးကျွန်းဆွယ်၊ ဒပ်ချအရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းစုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းယူပြီးလျှင် အနောက်တိုင်းသားတို့ကို နှင်ထုတ်ခဲ့လေသည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်ကား အားချင်းမမျှသဖြင့် လက်နက်ချ၍ ထိုနိုင်ငံများကို ပြန်အပ်ရ၏။ သို့ရာတွင် ထိုတိုင်းပြည်များကို တိုင်းရင်းသားတို့၏ နိုးကြားမှုကြောင့် နယ်ချဲ့သမားတို့သည် ရေရှည်မအုပ်စိုးနိုင်ချေ။ စစ်ပြီး၍ မကြာမြင့်မီ အသီးအသီး လွတ်လပ်ရေးများ ရရှိလျက် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို မြှင့်တင်လျက် ရှိကြသည်။
ထိုတောင်တန်းကို ဟိန္ဒုကွတ်ရှတောင်တန်းဟုခေါ်၏။ ဤသို့ အလယ်ဗဟို၌သာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်၍ အရပ်လေး မျက်နှာသို့ တရွေ့ရွေ့နိမ့်လျှော ဆင်းသွားရကား အာရှတိုက်သည် ရေပေါ်၌ ပေါလောပေါ်နေသော လိပ် ကျောကုန်းနှင့် တူလှပေသည်။ ထိုတောင်တန်းကြီးတို့၏ကြားတွင် တည်ရှိသော တိဗက် ကုန်းပြင်မြင့်ကြီးကား ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူနေသည့် အမြင့်ဆုံးသော ကုန်းပြင်မြင့်ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ပေပေါင်း ၁၆,၆ဝဝ မှ ၁၇,ဝဝဝ အထိ မြင့်၏။ တိဗက်ပြည်၏ အရှေ့ဘက်စွန်းတွင်လည်း ရေမျက်နှာပြင်ထက် ပေ ၉,ဝဝဝ ခန့်မြင့်သော ကိုကိုနော် ခေါ်အိုင်ပြာလည်းရှိ၏။အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဗလူချိစတန်နှင့်အီရန်နိုင်ငံတို့အပါအဝင်ဖြစ်သော အီရန်ကုန်းပြင်မြင့်၊ အာရှမိုင်းနားကုန်းပြင်မြင့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဒက္ခိဏ ကုန်းပြင်မြင့်တို့သည်လည်း အာရှတိုက်၏ ထင်ရှား ကျယ်ပြန့်၍ လူနေ အိမ်ခြေများသော ကုန်းပြင်မြင့်များ ဖြစ်ကြ၏။ အာရှတိုက်တွင် ကမ္ဘာ့အမိုးသာမက ကမ္ဘာ့မြေအောက်ခန်းလည်းရှိ၏။ ထိုမြေအောက်ခန်းမှာ အာရေဗျကျွန်းဆွယ်မြောက်ဘက်ရှိ ဒက်ဆီးခေါ် ပင်လယ်သေဖြစ်သည်။ ( ပင်လယ်သေ-။)
National Geographic Family Reference Atlas of the World။ ဝါရှင်တန်, ဒီ.စီ: National Geographic Society (U.S.)။ 2006။ p. 264။
Continents of the World။ The List။ Worldatlas.com။ 22 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The island of Cyprus is sometimes consideredatranscontinental territory: in the Eastern Basin of the Mediterranean Sea south of Turkey, it has historical and socio-political connections with Europe. The Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), distinct from the de jure Republic of Cyprus in the south (withapredominantly Greek population), is recognized only by Turkey.
The administrative capital of Myanmar was officially moved from Yangon (Rangoon) toamilitarised greenfield just west of Pyinmana on6November 2005.
The current state is formally known as the People's Republic of China (PRC), which is subsumed by the eponymous entity and civilization (China). Figures given are for mainland China only, and do not include ဟောင်ကောင်, Macau, and တိုင်ဝမ်.
Figures are for the area under the de facto control of the Republic of China (ROC) government, frequently referred to as ထိုင်ဝမ်. Claimed in whole by the PRC; see political status of Taiwan.
မာကောင်သည် တရုတ်ပြည့်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ Special Administrative Region
ဟောင်ကောင်သည် တရုတ်ပြည့်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ Special Administrative Region (SAR) တစ်ခုဖြစ်သည်